Purism's Librem 5 ichatanga kusvika pakupera kwaGunyana | Linux Vakapindwa muropa
Nguva pfupi yapfuura iwe tataura kubva kuPinePhone, iyo PINE64 iri-mumba nhare iyo inoshandisa akasiyana nhare eKDE Plasma uye ichatanga kusvika kune vanogadzira gare gare mwedzi uno. Iyo ichave iripo mwedzi uno, zvakanyanya kunyanya kutumirwa kwayo kwekutanga, ichave iyo Librem 5 kubva kuPurims, imwe foni ine Linux inoshanda sisitimu iyo, mune ino kesi, inotarisa kuchengetedzeka uye kuvanzika.
Kunge PinePhone, iyo Librem 5 ichave iri foni inomhanya yemahara uye yakavhurwa sosi software, asi inosanganisira mabasa anosanganisira mhando ye "switch" yekudzima zvachose zvinhu zvakaita seWiFi, kamera kana maikorofoni. Izvo zvave zviri mukuvandudzwa kwemakore maviri uye Purism yatove Zvaratidza kuti zvikamu zvekutanga zvinosvika munaGunyana 24 mu "Aspen Lot". Uye ndezvekuti Librem 5 ichavhurwa zvishoma nezvishoma mumabatch akasiyana, misi uye ine zvakatarwa zvakasiyana.
Mazhinji akasiyana eLibrem 5
Purism ichave ichiburitsa yayo Librem 5 nePureOS inoshanda system mune anotevera mabatch / vhezheni nehuni / mazita emiti:
Aspen: Gunyana 24.
Birch: Gumiguru 29.
Chestnut: Zvita 3.
Dogwood: Ndira 7.
miti yakasvibira: yechipiri chikamu che2020.
Fir: yechina kota ye2020.
Misiyano iri pakati pemijenya haisi mumazuva ekuuya chete, asi mune iyo dhizaini / kugadzira uye inoshanda sisitimu inosanganisirwa default. Iyo Aspen bundle ichauya neiyo yekutanga software, ine yakakosha mashandisirwo ekugadzirisa manejimendi, yekutanga kufambisa, bhatiri manejimendi padanho rekutanga uye inogadziridza kuburikidza netemu. Iyo dhizaini ichavandudzawo nekufamba kwenguva, kudzamara iyo Fir batch ichizoshandisa iyo Long Term Support software, ine kupera kuri nani uye 14nm CPU. Kutaura chokwadi uye kutaura zvese, iyo LTS vhezheni iri kuuyawo kuEvergreen batch.
Tichifunga izvi zvemabatch, pamwe haisi yakaipa pfungwa kumirira zvirinani kusvika kota yechipiri ya2020 uye tenga Librem 5 kubva kuEvergreen lot, uchiziva kuti mumwedzi inenge mitanhatu pachave nemimwe modhi ine processor yakavandudzwa. Chero zvazvingaitika, kubva mwedzi uno foni yakachengeteka yePurism ichave iripo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Yekutanga batch yeRibrem 5 kubva kuPurism ichasvika munaGunyana 24 ine yakakosha dhizaini uye software
Imwezve pano pasi akadaro
Ndinovimba chirongwa ichi chichienda kumberi, asi pasina echinyakare mapurogiramu eandroid, handifunge kuti ine yakawanda remangwana. Uye ini ndinosimbisa, ndinovimba enda kumberi.
Pindura kune mumwe pano
Haisi chishandiso chevanhu vazhinji, avo vakatsigira uye vakabatsira muchirongwa ichi vaitoziva izvozvo kubva pakutanga. Hazvina musoro kutaura kuti haina yakawanda remangwana kana zvataurwa (uye zviri pachena) kuti haisi yemunhu wese.